Tourism, Climate Change, Net Zero: Chiono chitsva cheSaudi Arabia munguva yeCOP26
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tourism, Shanduko Yemamiriro ekunze, Net Zero: Chiono chitsva chepasi rose cheSaudi Arabia munguva yeCOP26
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Wtn
Tourism, Shanduko Yemamiriro ekunze, Net Zero: Chiono chitsva chepasi rose cheSaudi Arabia munguva yeCOP26
Nyowani Global Coalition Inokurumidzira Yekushanya Indasitiri Shanduko kuNet Zero (PRNewsfoto / Ministry of Tourism yeSaudi Arabia)
Saudi Arabia iri kuunza vatambi vekushanyirana pamwechete kuti vapindure pamhedzisiro yedenda repasi rose uye kukosha kwakakosha kwenzira yakabatanidzwa yepasirese.
Shanduko kuNet Zero: Chitsva chitsva cheiyo yepasirese yekufambisa uye yekushanya indasitiri
Iyo yepasirese indasitiri yekushanyirwa inoitisa 8% yeglobal greenhouse gasi kubuda
Yakatangwa neSaudi Arabia nhasi, humambo hwakaisa pamberi matanho ekukurumidza kutsigira chikamu chakakosha mukuchinja kwaro kuita zero.
Nyowani Global Coalition Inokurumidzira Tourism Tourism Shanduko kuNet Zero
Hurumende yeSaudi Arabia yakaparura Sustainable Tourism Global Center (STGC), nyika dzakawanda, mubatanidzwa wevashandi vazhinji uyo unosimudzira shanduko yebazi revashanyi kuenda kune zero-zero, pamwe nekufambisa danho rekuchengetedza zvisikwa nekusimbisa nharaunda.
Yakatangwa nhasi naHRH Crown Prince Mohammed Bin Salman, iyo Sustainable Tourism Global Center ichatsigira vafambi, hurumende, uye masangano akazvimirira, kuona kuti kushanya kunogonesa kukura uye kugadzira mabasa, uku uchitamba chikamu chayo kuzadzisa zvinangwa zvemamiriro ekunze zvakaiswa muParis. Chibvumirano, kusanganisira kubatsira kuchengetedza nyika kusvika pasi pe1.5-madhigirii ekudziya kweCelsius.
Iyo Global Center ichava chikuva chekuunza ruzivo rwese uye hunyanzvi; inovavarira kuve "nyeredzi yekuchamhembe" kune chikamu chekushanya sezvo ichipora kubva kuchirwere cheCOVID-19 uye shanduko yakananga kune ramangwana rakasimba. Pasi rose, kushanya kunobatsira vanhu vanopfuura mamirioni mazana matatu nemakumi masere ekurarama - uye pre-denda, yaive nebasa rekuumba rimwe chete mumabasa mana matsva pasirese.
Rondedzero yemubatanidzwa uyu nemasevhisi aachazopa achaziviswa zviri pamutemo panguva yeCOP26.
HE Ahmed Al Khateeb, Gurukota rezvekushanyirwa kweSaudi Arabia vakati: “Bazi rezvekushanyirwa kwenyika rinopa chikamu che8% chekuburitswa kwegasi regreenhouse pasi rose – uye izvi zvinotarisirwa kukura kana tikasaita basa izvozvi. Tourism zvakare chikamu chakakamurwa kwazvo. 80% yemabhizinesi ekushanya mabhizinesi madiki uye epakati nepakati ayo vimba nehungwaru nerutsigiro kubva kuhutungamiriri hwesangano. Chikamu chinofanirwa kuve chikamu chemhinduro.
"Saudi Arabia, ichitevera chiono uye hutungamiriri hweHumambo Hwake Humambo hweCrown, iri kupindura runhare urwu rwakakosha nekushanda nevadyidzani - vanoisa pamberi pekushanya, maSME nemamiriro ekunze - kugadzira mubatanidzwa wenyika dzakawanda, wevazhinji, unotungamira. , mhanyisa, uye tevera shanduko yeindasitiri yekushanya kusvika kune zero emissions.
“Kuburikidza nekushanda pamwe chete nekupa hwaro hwakasimba hwakabatana, bazi rezvekushanyirwa kwenyika rinenge rava nerutsigiro rwarinoda. "STGC icharerutsa kukura ichiita kuti kushanya kuve nani kune mamiriro ekunze, zvisikwa nenzvimbo."
HE Gloria Guevara, Chief Special Advisor kune Minister of Tourism, akati: “Kwemakore nemakore, vatambi vakawanda muchikamu chekushanyirwa kwenyika vanga vachishanda muzvirongwa zvakasiyana kuti mujaho uyu usvike pazero – asi isu tanga tichishanda mumatura. Mhedzisiro yedenda repasirese munharaunda yekushanya yakaratidza kukosha kwakakosha kwenzvimbo dzakasiyana-siyana, kudyidzana kwevazhinji. Uye ikozvino, Saudi Arabia iri kusimuka kuunza vane chekuita pamwe chete kuita kushanya chikamu chemhinduro yekushanduka kwemamiriro ekunze. "
Gloria ndiye aimbova CEO weWorld Travel uye Tourism Council (WTTC)